भिडीयो « Ramechhap News
२६ वैशाख, रामेछाप । नेकपा एमाले उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार शेरबहादुर सुनुवारले पाँच बर्षे कार्यकालमा उमाकुण्ड गाउँपालिकामा विकासको जग हालेर राम्रो काम गरेको बताएका छन् । उनले आफूहरुको कार्यकालमा समृद्धिको
२६ वैशाख, रामेछाप । नेकपा एमाले मन्थली नगरपालिकाका नगरप्रमुखका उम्मेदवार लव श्रेष्ठले नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन आफूहरुसँग योजना रहेको बताएका छन् । उनले रामेछापलाई चिनाउने मन्थली नगरपालिका भएको बताउदै नगरपालिकाको विकासका
२६ वैशाख, रामेछाप । नेकपा माओवादी सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार ठूलोकान्छा तामाङले आगामी पाँच बर्षमा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् । उनले गत निर्वाचनमा माओवादीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पूर्वाधार निर्माणको
२४ वैशाख, रामेछाप । नेकपा एमाले गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार खड्ग बहादुर सुनुवारले अबको पाँच बर्षमा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् । गत पाँच बर्षे कार्यालयमा गत निर्वाचनमा गरिएको मध्ये
रामेछाप नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने यस्तो छ रोशन पाख्रिनको पाँच योजना (भिडियो)
२१ वैशाख, रामेछाप । नेकपा एमाले रामेछाप नगरपालिकाका नगरप्रमुखका उम्मेदवार रोशन पाख्रिनले रामेछाप नगरपालिकालाई पाँच बर्षको अवधिमा समृद्ध बनाउने योजना आफूसँग रहेको बताएका छन् । उनले गत निर्वाचनमा हारेपनि जनताकैबीचमा
यस्तोे छ खाँडादेवी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने ज्ञान कुमार श्रेष्ठको योजना (भिडियो)
२१ वैशाख, रामेछाप । नेकपा एमाले खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार ज्ञान कुमार श्रेष्ठले पाँच बर्षमा खाँडादेवी गाउँपालिकालाई हराभरा बनाउने बताएका छन् । उनले गाउँपालिकाको अधिकाशं क्षेत्र सुख्खाग्रस्त रहेको बताउदै भटौली
गायक शिव परियारको पिउन सुरु गरेपछि…….
गायन क्षेत्रमा चर्चित एवं अब्बल गायकको रूपमा चिनिन्छन् शिव परियार । गायक परियारका अधिकांश गीत दर्शक–श्रोताले मन पराएका छन् । पछिल्लो समय गायक परियारको “पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले” को
मिस नेपाल प्रतियोगीता अन्तर्गत रामेछापकै चेली सिजा चौलागाई टप २१ मा छनोट भएकी छिन् । सुनापती गाउँपालिका–१ गुन्सी भदौरे निवासी चौलागाई टप २१ मा छनोट भएकी हुन् । चौलागाई प्रतियोगिताका
‘सँगै मरौला’ सार्वजनिक (भिडियो
रामेछाप निवासी सन्तोष जंग थापाको शब्द र निशान भट्टराईको स्वर रहेको नयाँ गीत ‘संगै मरौला’ सार्वजनिक भएको छ । सद्भाब टिभि नेपालबाट सार्बजनिक भएको उक्त म्युजिक भिडियोमा नबिन कार्कीको संगीत
रामेछाप निवासी अधिकारीको नयाँ गीत घुमन्ते फिरन्ते (भिडियो)
रामेछाप मन्थली नगरपालिका–१२ स्थायी घर भइ हाल अष्टेलियाको सिड्नीमा बस्दै आएका बविम अधिकारीको नयाँ गीत धुमन्ते फिरन्त सार्वजनिक भएको छ । आधा दर्जन बढी गीतको लिरिक्स लेखीसकेका अधिकारीले हालै घुमन्ते
उमाकुण्ड गाउँपालिकामा कांग्रेसको चुनावी अभियानः नाच्दै गाउँदै भोट माग्दै
२६ वैशाख, रामेछाप । उमाकुण्ड गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेले चुनावी अभियान तीब्र बनाएको छ । घरदैलोे
सुनापतिमा एमालेको चुनावी सभाः चुनाव जित्ने दावी
२६ वैशाख, रामेछाप । चुनावी अभियान अन्तर्गत सुनापति गाउँपालिकाको केन्द्र हिलेदेवीमा नेकपा एमालले चुनावी सभा
रामेछाप नगरपालिकामा सुरु भयो चुनावी हिसाब, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा कसले जित्ला ?
२६ वैशाख, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिकामा राजनीतिक दलहरुबीच चुनावी हिसाब सुरु भएको छ । चुनावी